Semalt: Darodar.com रेफरल भनेको के हो?
यदि तपाईं नियमित रूपमा तपाईंको गुगल एनालाइटिक्स खाता जाँच गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले अधिग्रहण च्यानलहरूमा केही रेफरल स्रोत देख्न सक्नुहुनेछ। एक झलकमा, यी स्रोतहरू निर्दोष देखिन्छन् जब सम्म तपाईले राम्रोसँग जाँच गर्नुहुन्न तपाईको एनालिटिक्स डाटाको साथ के हुँदैछ। बिभिन्न वेबमास्टरहरू र ब्लगरहरूले darodar.com बाट उनीहरूको वेबसाइटहरूमा आउने ट्राफिकको उल्लेखनीय मात्रा देख्दछन्। Semalt विज्ञ, जूलिया वाश्नेभा चेतावनी दिन्छन् कि गलत ट्राफिक darodar.com मा सीमित छैन, यो अन्य रेफरलहरू र उनीहरूसँग सम्बन्धित लिंकहरू जस्तै नि: शुल्क वेबसाइटबटनहरू, कम्बासोफ्ट, mamakemoneyonline, र अन्यबाट आउँदछ। यी साइटहरूले वेबमास्टरहरू, व्यवसायीहरू, र मार्केटरहरूको लागि रातो झण्डा खडा गर्दछन्, र darodar.com के हो भनेर पत्ता लगाउने समय भयो र यसले कसरी रेफरल स्पाम सेवा काम गर्दछ।
दरोदर भनेको के हो?
२०१ 2013 मा, केही वेबमास्टरहरूले darodar.com को रूपमा चिनिने साइट र यसको भिन्नताहरूको अनौंठो रेफरल भ्रमणहरू अवलोकन गर्थे। व्यक्तिहरूले पत्ता लगाए कि उनीहरूका साइटहरूले अज्ञात र संदिग्ध वेबसाइटहरूबाट प्रति महिना २०० देखि २०० भेटहरू प्राप्त गर्दै थिए, र बाउन्स दर १००% थियो जसको अर्थ आगन्तुकहरूले उनीहरूको साइटहरूमा एक सेकेन्ड भन्दा बढी खर्च गरेनन्। चाँडै साइट मालिकहरू र वेबमास्टर्सहरू मुख्य प्रवक्ता रेफरल स्प्याम नेटवर्कको रूपमा दारोदारलाई ठक्कर दिए।
यो उल्लेख गर्न सुरक्षित छ कि darodar.com आफैलाई सर्वश्रेष्ठ SEO कम्पनीको रूपमा मार्केट गर्दछ जुन तपाइँको साइटको स्तर सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। वास्तवमा यो कम्पनीले तपाईंको गुगल एनालिटिक्स खातालाई नक्कली ट्राफिकको साथ प्रदूषित गर्दछ र मुख्य समस्या यो हो कि यसको रेफरल स्पामबाट मुक्त हुन असम्भव छ। वेब विज्ञहरूले दावी गरे कि darodar कालो टोपी SEO रणनीति काम मा फिर्ता ल्याएको छ। यो कम्पनी एक स्पाम रेफरल विशालको रूपमा देखा परेको छ र यसको तथाकथित वेबमास्टर उपकरणहरू कम आगंतुक गणनाको साथ साना र ठूला आकारका वेबसाइटहरूलाई लक्षित गर्दछ। अर्को शब्दहरुमा, हामी भन्न सक्दछौं कि यो साइटले वास्तविक ट्राफिक ल्याउन चिन्ता गर्दिन र मध्यम र आकारको व्यवसायलाई आफ्नै स्तर निर्धारण गर्न लक्षित गर्दछ।
यदि तपाइँ darodar.com कसरी काम गर्छ भनेर सोच्नुहुन्छ भने, मलाई तपाईलाई बताउन दिनुहोस् कि यसको बोटहरू र माकुरोहरूले तपाइँको वेबसाइटको सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध पहुँच लगमा लाखौं अनुरोधहरू पठाउँछन्। यी सबै अनुरोधहरू पहुँच फाइलमा लग इन छन्, एचटीएमएल रेफरर लिंक सिर्जना गर्नुहोस् र तपाईंको गुगल एनालिटिक्स खातामा रेफरल भ्रमणको रूपमा देखा पर्नेछ। यो पनि विश्वास गरिन्छ कि darodar.com साइटहरु को लागी दर्जनौं झूटा आगन्तुकहरु पठाउँदछ र Google विश्लेषक डेटा ट्रिक। मुख्य समस्या यो हो कि बट्सले रोबोटलाई बेवास्ता गर्दछ। निर्देशिक अनुक्रमणिकामा अनुरोध नगर्न निर्देशन। रोबोट.टक्सट फाईलहरू तपाईंको वेबसाइटलाई अनुक्रमणिका गर्ने र जानकारी स collecting्कलन गर्नबाट वास्तविक बट्सलाई निरुत्साहित गर्न व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। असंख्य वेब क्रोलरहरू दैनिक आधारमा तपाईंको साइटको सर्भरहरूमा पहुँच गर्दछ। गुगल र अन्य खोज ईन्जिनहरूले तपाईको साइटलाई अनुक्रमणिका गर्न क्रोलरहरू पनि प्रयोग गर्दछन्, र त्यो darodar.com ले पनि गर्छ।
तपाईले darodar.com वा कुनै पनि अन्य सम्बद्ध साइट भ्रमण कहिले गर्नुहुन्न यदि तपाईं इन्टरनेट मा आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्न चाहानुहुन्छ। साथै, तपाईले यसको प्लगइन प्रयोग गर्नुहुन्न र तपाईको खोज इञ्जिन नतीजाहरूबाट darodar.com हटाउन कोसिस गर्नुहुन्न। अधिक गम्भीरताका साथ, तपाईले यो सुनिश्चित गर्न क्यास खाली गर्नुपर्दछ कि darodar.com र यसका सम्बद्धहरू तपाईंको ईतिहासमा उपस्थित छैनन्। यस रेफरल स्प्यामबाट छुटकारा पाउनको लागि तपाईले यसलाई गुगल एनालाइटिक्स खाताबाट फिल्टर गर्नुपर्नेछ। यद्यपि यसले बट्सलाई तपाइँको साइट खोल्न कहिँ रोक्दैन, यसले darodar.com वरपरका फुलेको डाटा र वेबसाइटका लागि बटनहरू-बाट छुटकारा पाउनेछ। तपाईं .htaccess फाईलबाट darodar.com रोक्न सक्नुहुन्छ, र यो तपाईंको URL मा माथि निर्दिष्ट कोड राखेर गर्न सकिन्छ।